विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरु | जुज्दाइका २ पैसे विचारहरुको सँगालो
विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरु
Posted on August 28, 2015 by jujumaan
नमस्ते, विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरु। ‘प्रगति’ कत्तिको हुँदैछ?
विदेशाँ धेरै नेपालीहरु बस्चन। सबै महान आत्मा हुँदैनन्। यो तिनीहरुका लागि लेखिएको हो जो आफूलाई महान भन्ठान्छन। ब्याबिलोनको टावर था’छ? त्यस्तै उचाइबाट प्रवचन दिने महान आत्माहरु, जो जमीन/आफ्नो ‘बेस’बाट सम्पर्कविहीन छन, तिनलाई लक्षित। विदेशमा बसेर देशको नैतिकताको ठेक्का लिनेहरुलाई। जिजस क्राइस्ट कम्पलेक्स (savior complex) हुनेहरुलाई मात्र।
खास कुरा के भने विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरु, लाज लाग्दैन तपाईँहरुलाई?
तपाईँ बस्नी अपार्टमेन्ट होस् या घर, या एक्लै या आफ्ना परिवारजनसँग हाँसीखुसी बस्नुहुन्च होला। आफ्नै परिवारसँग बस्या घराँ त ब्यानब्यान चर्पी जाँदा गतिविधिको असर अरुले बोध नगरून भन्ने शरमले चुकुल लाउनुहुन्च भने, नेफोल भन्नी चिन्दै नचिनेका मान्छेहरु बस्नी ठाउँका बारे हजुरका गतिविधि जबरजस्ती ठेल्दा, अनि २-४ महान वाणी मुखाट चिप्लित्त पार्दा शरम किन नलाग्नी के। अचम्म लाग्छ हेर्नुस् म झ्यासलाई।
अब अरु थप बास्नुभन्दा पहिले के भनिहाल्छु भने, यो मुल्लाले विदेश आउन नपाएको डाढले सराप्नु सराप्ने भो भन्नुहोला। तर स्याम काकाको देशमा धेरै साल गुजार्‍या मान्छे हुँ म। (यति भन्दा अरु झ्यासले धाक दियो भन्लान…. हाहाहा, के गर्नु, सबैको चित्त बुझाउनु नि कम्ता गाह्रो छ हाम्रो देशाँ! :D) यति भन्दैमा तपैँ ‘प्रगतिवान’लाई यसरी खुलेआम लेख्नी अधिकार त नहोला। तर के गर्नु, मनले मागेको गर्नपर्छ रे भनेर फिलिममा सिखाए, सिखियो। अहिले आएर यो खसखस, यो बित्थाको दु:ख मलाई हेर्नुस् त। 😀
तपैँ विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरु जति नै खतरा अंग्रेजी मेरो नहोला। नत्र यो लेख अंग्रेजीमा ठोक्दि हाल्थेँ नि! अनि तपैँहेरुजति दूरदर्शिता नि ममा नहोला। नत्र यो गुलाबपत्र आच्या खुला पत्र (गुलाबपत्र जति हेर्दा राम्रो र वासनादार पनि छैन यो लेख) बारुलोको लेखेर बारुलोको गोलोमा हात किन हाल्थेँ होला। हैन?
तर एउटा कुरा चैँ ममा के छ भने हेर्नुस् विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरु, त भन्दा: सोमत। सोमत चैँ मसँग अलिलि छ। नेपालैयाँ बस्नी धेरैसँग छ यो। विदेशैँया बस्नी तपैँको क्यालिबरभन्दा कमवालाहरुसँग नि कुस्त छ।
मुख छाड्दैछस, यी नाप्पियो तेरो सोमत भन्नुहोला। अब तपैँका महान तर्कलाई हैन भन्न त सक्दिन। तर २-४ कुरा सुन्दिहाल्नुस् मेरो, अनि निचोड निकालौँला कसको सोमत कति भनेर।
यसो विचार गरील्याउँदा नि, विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरु, मसँग हो लाई हो भन्ने र होइन लाई होइन भन्नी सोमत रैछ के। सबैभन्दा पछिल्लो घटना – कैलालीको आतंककारी अपराधलाई हेर्नी हो भने मे भन्चु- मुजीहरुले गुकाम गरे। (उक्त अंगले अरु के गर्च त ठ्याँस्नी भन्नुहोला। त्यसैले त तपैँ सर्वज्ञानी नि।)
तर तपाईँ विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरुले भन्नुभयो: अधिकार नदिएपछि जेकाम नि गर्छन त। कुरो त मनासीब हो, तर त्यसको लगत्तै भारतमा जे भयो, त्योबारे मौन बस्नुभो। चुइँक्क बोल्ने नि आँट भएन। भनिएका गलत कुरालाई गलत भन्नी रौँबराबरको हिम्मत देखिएन। मतलब सीधै भन्दा, २ पैसोको नि सोमत देखिएन हो लाई हो र होइन लाई होइन भन्न।
मैले त भनेँ। मलगायत लाखौँ करोडौँले नि भने। तर अरुका कुरा सुन्ने सोमतसम्म नभएपछि हामी झ्यासको भुकाइ खेरै गयो हेर्नुओस्।
अब अर्को कुरा गरौँ, साबिकको (in general भन्छन नि अंग्रेजीमा)। थुतुनो बड्ता चल्छ के तपैँको। बाह्रैमास।
मेरा मामा हुनुन्च। है, कुरा के भने, बुडा जुगमा तास बेपत्ता खेल्नी। मावली गाउँमा अरुले भन्थे- झ्यास भानिच! तेरा मामाले तास फिट्दा त ४ वटा गुलुप बल्नी गरी बत्ती निकाल्दिन्छन।
तपाईँको थुतुनो चल्दा ४ हैन १४ वटा गुलुप बल्नी गरी बत्ती निकाल्दिनु हुन्च के। म मान्दछु यार विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरु, तपैँको मुखारविन्दलाई। आइ मिन, इभन क्याटल क्यान्नट प्रोड्युस सो मच मिथिन ग्याँस फ्रम दिअर रिअर माउथ्स! कला हुनुपर्च यसरी बोल्न त।
भन्नुहोला – तँ चैँ कौन सा गंगाजीमा न्वाउँछस् र? तँ नि विदेशैयाँ बस्छस्। मनपरी बोलेकै छस् त।
हो, होइन त म कसरी भनूँ र तपाईँका अकाट्य कुराहरुलाई।?
तर मैले बोल्दा किनकिन धेरैले हो मा हो मिलाउँछन। मलगायत अरु अनेकन झ्यासहरुले बोल्दा म पनि हो मा हो मिलाउँछु। २ लाख जनताले एउटा कुरा गर्दा र हजुरहरु जाबो २ छटाक नि नपुग्नेहरुले अर्को कुरा गर्दा कसको कुरा पत्याउनी के? यसरी कहिले सोच्नुभ’को छ, विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरु?
थप्नुहोला – कोपरनिकसले सूर्यको वरिपरि पृथ्वी घुम्च भन्दा बडा सास्ती पायो। तर आखिरमा कसको जीत भयो? हामी नि तेस्तै हुम्।
अब कोपरनिकससँग, ग्यालिलियोसँग आफ्नो तुलना गर्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ भने त म के भनौँ र? तर जाँदाजाँदै एउटा कथा है?
एउटा मिर्ग रछ हेर्नुस्, खोलावारी वनाँ। पारि घाँस गजब देखेछ एकदिन। यतापट्टि बसेर भएन, उता गएर ‘पर्गति’ गर्नपरो भनेर उता’ट्टि गएछ। घाँस अर्को साइडाँ राम्रै थ्यो थिन नि। तर त्यो मिर्ग, लब्ली घाँस पाएको उन्मत्ततामा आफ्ना पहिलेका दौँतरी मिर्गहरुलाई भन्दो रछ – तिमीहरुले घाँस खानै जानेनौ। तिमीहरुले घाँसको बाँडफाँड बडो हेलचेक्र्याइँले गर्‍यौ। सबैलाई बाँड्न परेन? खाँदा शालीन तरिकाले खान परेन?
यतापट्टिका मिर्ग – तैँले बाड्या छस्?
उतापट्टिको मिर्ग – छैन।
यतापट्टि – तेसो भए ऊ त्याँ पर्तिरको पसलाँ एक मोहरमा पाइने सोमत चकलेट छ। त्यो खा, अनि हामीसँग कुरा गर्न आइज।
कथा सकियो विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरु। मन पर्‍यो कि नाइँ? मन नपरे यित्रैसिती हो। 😂😂😂
जाउँ भनेको, एउटा तुच्छ कुरा थप्न जोड गर्‍यो मेरो सानो दिमागले।
तपैँ के, पैचान पैचान भनेर कराउनुहुन्च है। देशमा फलानो वर्गको पैचान भएन, उसको जातीय संस्कार र आवाज दबियो भन्नुहुन्च।
अब तपैँ विदेशाँ बस्नुहुने ब्राउन छालावाला नेफुली। तपैँका बालबच्चा नि ब्राउन छालैवाल नेफुली। बालबच्चाले नेफुली कनेर बोल्दा, अंग्रेजी पटटटट बोल्दा पैचान सैचान ट्वाइलेटाट फलश हुन्च, देखेकै कुरो हो। तर यिनको हकको लागि त आवाज उठ्दैन त, विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरु?
छ्या कस्तो यथास्थितिवादी खेपा कुरो गरो भन्नोला है? आफैँले गर्दा चैँ प्रगतिशील, महान कार्य। हैन त?
छातीमा हात राखेर भन्नुस् त विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरु, आफूले पादेको मीठो मान्नुन्च?
← कृषिमा कम्पनीको प्याटेन्ट: किसानलाई पासो
दोबाटेको भात →
One thought on “विदेशमा बस्ने महान नेपाली आत्माहरु”
दाई कति मिठो लेख्छौ है । बुढाले आजकाल किन ब्लग लेख्दैनन् भन्ने सोचेथेँ; हटमेल खोल्न जाँगर चलेन नत्र त मेलमा खबर आईहाल्थ्यो । कताबाट यो वर्डप्रेस खोलेछु, भरखरै प्रेस गरेछौँ । धन्य भएँ म । :))